ပွဲနိုင်ပေမယ့် အလှောင်ခံရတဲ့ PSG ၊ ပိုင်ရှင်သစ်ပေါ်လာတော့မယ့် ချဲလ်ဆီး ၊ အဆင့် ၄ အတွက် တားဆီးမရတဲ့ အာဆင်နယ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းမျာ - xyznews.co
ပွဲနိုင်ပေမယ့် အလှောင်ခံရတဲ့ PSG ၊ ပိုင်ရှင်သစ်ပေါ်လာတော့မယ့် ချဲလ်ဆီး ၊ အဆင့် ၄ အတွက် တားဆီးမရတဲ့ အာဆင်နယ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းမျာ
ယမန်နေ့ ညက ကစား သွားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ အဆင့် ၄ နေရာ အတွက် တိုက်ပွဲ ဝင်နေကြတဲ့ အာဆင်နယ် ၊ ဝက်စ်ဟမ်း နဲ့ ဝုဗ် တို့ အားလုံး နိုင်ပွဲတွေ ရရှိခဲ့ ကြပါတယ် ။
ပုံစံကောင်းတွေ ပြနေတဲ့ အာဆင်နယ် ဟာ လက်စတာ ကို အိမ်ကွင်းမှာ ခြေအသာနဲ့ ကစားပြီး ပါတေး ၊ လာကာဇက် တို့ရဲ့ ဂိုးတွေ နဲ့ အနိုင်ယူကာ အဆင့် ၄ ကို ပြန်လည် သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဝက်စ်ဟမ်း က အက်စတွန် ဗီလာ ကို ၂-၁ ၊ ဝုဗ် က အဝေးကွင်းမှာ အဲဗာတန် ကို ၁-၀ တို့နဲ့ အနိုင် ရရှိ ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဆန်ရှင်ပေါင်း များစွာ ထိုးနှက် ခံနေရတဲ့ ချဲလ်ဆီး အသင်းဟာလည်း ကွင်းထဲက ပုံစံကောင်းတွေကို ဆက်လက် ပြသ ကာ နယူးကာဆယ် ကို ၁-၀ နဲ့ အနိုင် ကစား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အီတလီ စီးရီးအေ မှာတော့ အင်တာမီလန် တို့ သရေ ကျခဲ့ပြီး နာပိုလီ ကတော့ နိုင်ပွဲ ရခဲ့ ပါတယ် ။ ဒီတပတ် ပွဲတွေ အပြီးမှာတော့ အေစီမီလန် က အဆင့် ၁ နေရာကနေ ၃ မှတ်ဖြတ်ကာ ဦးဆောင် နေပါတယ် ။
စပိန် လာလီဂါ မှာတော့ ဘာစီလိုနာ တို့ ပုံစံကောင်းတွေ ဆက်လက် ပြသခဲ့ပြီး အိုဆာဆူနာ အသင်းကို အိမ်ကွင်းမှာ ၄-၀ နဲ့ အနိုင် ရရှိခဲ့ ပါတယ် ။
ဒီပွဲမှာလည်း ဇန်နဝါရီမှ ရောက်လာတဲ့ ဖာရန်တောရက်စ် ( ၂ ဂိုး ) ၊ အော်ဘားမီးယန်း ( ၁ ဂိုး ) တို့ ဂိုးတွေ ဆက်သွင်းခဲ့ကြပါတယ် ။
PSG ဟာ မနေ့က ဘိုဒေါ့စ် အသင်းကို ၃-၀ နဲ့ အနိုင် ကစားခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ကနေ ထွက်ခွာ ခဲ့ရတာကြောင့် အခဲမကြေ ဖြစ်နေတဲ့ ပရိသတ်တွေဟာ PSG ကစားသမားတွေကို လှောင်ပြောင် အော်ဟစ် ခဲ့ပြီး နေမာ ၊ မက်ဆီ တို့ ဘောလုံး ထိတိုင်း ဝိုင်းဝန်း အော်ဟစ် ခဲ့ကြပါတယ် ။
အဆိုပါ ပွဲမှာ ဘာပေ တဦးသာ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ လှောင်ပြောင်မှု ကို မခံ ခဲ့ရတာလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ နည်းပြ ဇာဗီ က သူဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ပွဲအပြီးမှာ မက်ဆီ ကို ဆက်သွယ်ပြီး စကား ပြောဆိုခဲ့ တယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ် ။ အသင်းဖော်ဟောင်း ဖာဘရီဂတ်စ် ကလည်း ရီးရဲ ကို အရေးနိမ့်ရမှု နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မက်ဆီ ကို ကာကွယ်ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
စပိန် ဂျာနယ်လစ် ဂျရတ် ရိုမာနို ကတော့ မက်ဆီ ဟာ နွေရာသီမှာ ဘာစီလိုနာ ကို ပြန်ပြောင်းဖို့ စဉ်းစား လာလိမ့်မယ်လို့ ထုတ်ပြောသွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ဟင်းနရစ် လာဆင် က ဥက္ကဌ လာပေါ်တာ အနေနဲ့ နည်းပြဟောင်း ရော်နယ် ကိုးမန်း အပေါ် ဆိုးဆိုး ရွားရွား ဆက်ဆံ ခဲ့တယ်လို့ ဝေဖန် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
လာပေါ်တာ ကတော့ သူတို့ အနေနဲ့ ငွေ ရှိရင်တောင်မှ အာလင်း ဟာလန်း လို အသင်းရဲ့ ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေကို ယိုင်လဲ စေမယ့် ခေါ်ယူမှုမျိုး ပြုလုပ်ဖို့ မလွယ်ကူ ပါဘူးလို့ ထုတ်ပြောခဲ့တာကြောင့် ဟာလန်း နဲ့ မန်စီးတီး သတင်းတွေ ပိုမို ခိုင်မာလာခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကနေ နွေရာသီမှာ ထွက်ဖို့ ရှိနိုင်တဲ့ တိုက်စစ်မှူးလေး မားကပ် ရက်ဖိုဒ့် ရဲ့ အခြေအနေ ကို စောင့်ကြည့် နေတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အမျိုးသမီး အသင်းကတော့ ယမန်နေ့က ရီးရဲ အမျိုးသမီး အသင်းကို ၅-၀ နဲ့ အနိုင် ကစား အပြီးမှာတော့ ပွဲစဉ်အချို့ ကျန်ရှိ နေသေးချိန် မှာပဲ စပိန် အမျီုးသမီးလိဂ် မှာ ချန်ပီယံ ဖြစ်သွားခဲ့ပြီလို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး အသင်းကို ပေါင် ၂ ဘီလီယံ နဲ့ ဝယ်ယူဖို့ နီးစပ် နေတဲ့ နစ် ကန်ဒီ ဟာ အသင်းအတွင်းမှာ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ( Fan Ownership ) ကို ထည့်သွင်း သွားဖို့ စဉ်းစား ထားကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် ချဲလ်ဆီး ကို ဝယ်ယူဖြစ်ခဲ့ပါက သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ ငွေကြေးအချို့ ကိုလည်း အသင်းထံ ချေးငှား ပေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး နည်းပြ သောမတ်စ် တူချယ် က သူဟာ အနည်းဆုံး ဒီရာသီ ကုန်တဲ့ အထိ အသင်းရဲ့ နည်းပြ အဖြစ် ဆက်လက် ရှိနေမှာ ဖြစ်တယ်လို့ အတည်ပြု ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အဲဗာတန် နည်းပြ ဖရန့်လမ်းပတ် က သူတို့ အနေနဲ့ လက်ရှိ ရလဒ်ဆိုးတွေ ကနေ ရုန်းထွက်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ဆက်လက် ကျန်ရစ်နေမယ်လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ဝုဗ် ကို ရှုံးနိမ့်တဲ့ ပွဲအပြီးမှာ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ သူတို့ရဲ့ ကာရင်တန် လေ့ကျင့်ရေးကွင်းကို ပြန်လည် မွမ်းမံဖို့ အတွက် ပရောဂျက် မန်နေဂျာ တဦးကို ငှားရမ်းထားတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် လက်ရွေးစင် နည်းပြ ဆောက်ဂိတ် ဟာ ဗီလာ ရဲ့ အင်္ဂလန်သား ၂ ယောက် ဖြစ်တဲ့ အိုလီ ဝက်ကင်းစ် နဲ့ ဂျက်ကော့ ရမ်ဆေး တို့ရဲ့ ခြေစွမ်းကို အကဲခတ်ဖို့ အတွက် နည်းပြ အဖွဲ့ဝင်တွေကို ဗီလာ ပွဲတွေကို စောင့်ကြည့်ဖို့ စေလွှတ် ထားတယ်လို့ သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
Previous Article ကြွေတက်နေတဲ့ ငှက်ကျားတို့ကို ခြင်္သေ့ပြာတို့ ရပ်တန့်နိုင်ခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီး ၁ – ၀ နယူးကာဆယ် ပွဲမှ ချဲလ်ဆီး အသင်းသားတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ( Ratings )
Next Article “ မျက်လုံး တစ်ဖက်က လီဗာပူး ရဲ့ ရလာဒ်တွေကို စောင့်ကြည့်နေရပါတယ်” ပက်ဂွာဒီယိုလာ